Xiisadda Khaliijka: Trump oo muddo u qabtay dalalkii Qadar go’doominta saaray – Kasmo Newspaper
Updated - April 13, 2018 1:15 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa dalalka Sacuudiga, UAE, Baxreyn iyo Masar u qabtay 3 toddobaad gudahood in ay ku soo afjaraan qalalaasaha Khaliijka.
Dalalkaas dhammaanbtood waxay ahaayeen kuwii 5tii Juun 2017kii xiriirkii Dibolomaasiga ahaa u jaray, cunaqabataynta iyo go’doomintana ku soo rogay dalka Qadar, xurguf hoose oo dhexmartay darted.
Wadahadal 2dii April, khadka taleefanka ku dhexmaray Trump iyo Boqor Salmaan, laakiin shaaca laga qaaday 10 casho ka dib 12kii April, Madaxweynuhu wuxuu Riyadh ka codsaday in go’doominta laga qaado, lana soo celiyo xiriirkii Qadar, si loo abuuro ‘Front’ mideysan oo looga hortago Iiraan.
Sida laga xiganayo Saraakiil Maraykan ah oo magacooda qariyay, codsiga Trump wuxuu ahaa mid adag, laakiin lama oga waxa Boqorku ku soo jawaabay.
Waxay intaa ku dareen in ‘Madaxweynuhu mar kasta xoogga saarayo Iiraan iyo barnaamijkeeda Nuclear-ka iyo Gantaalaha, oo Israel ka sokow, halista ku ah dalalka Khaliijka.
Isaga oo hoosta ka xarriiqay in colaadda Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku ku hayaan dalka Qadar ayan lahayn wax macne ah’.
Bilowgii qalalaasaha Khaliijka, Madaxweynaha Maraykanku wuxuu taageersanaa mowqifkii Sacuudiga iyo UAE, laakiin markii dambe wuxuu u xishay dhexdhexaadin la dhex dhigo dhinacyada oo lagu xallinayo khilaafka sida ugu dhakhsaha badan.
Maraykanka ayaa qaba walaac ku saabsan in cawaaqibka qalalaasaha Gacanku noqdo mid isku soo dhoweynaya Qadar iyo Iiraan oo ah cadawga ugu weyn Bariga Dhexe ee Maraykanka.
Trump ayaa maalintii Talaadada, 10kii April, xaaladda Khaliijka la soo qaaday Amiirka Qadar, Tamim bin Hamid Al-Thani, oo booqasho rasmi ah ku tagay Maraykanka. Madaxweynuhu wuxuu munaasibddaas ku caddeeyay in xiriirka Washingto iyo Dooxa uu yahay mid aad u wanaagsan.